February 11, 2021 - Babal Khabar
Feb112021 by बबाल खबरNo Comments
बिहेपछि महिलाको हि’प किन बढ्छ? पढनुहोस यस्ता छन् १० अनौठा कारण !
प्राय जसो बिहे पछी महिलाहरुको शा’रीरिक परिवर्तन हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन देख सकिन्छ । साथै बिवाह पछी महिलाहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । सामान्य तय अन्य महिलाको तुलनामा विवाहित महिलाको हि’ पको आकारमा धेरै परीवर्त भएको देख्न सकिन्छ ।हाम्रो देशमा सामान्यतय महिलाहरु सानै उमेरमा शा’रीरिक विकास नभएकै बेला बिवाह गर्छन त्यस कारणपनि बिहेपछी हि’ पको साइज बढ्नु अथवा ठुलो हुनु सामान्य मानिन्छ । तर अमेरिकामा एक सोधकर्ताहरुले भने भिन्नै तथ्य पत्ता लगाएका छन् ।हि’ पको आकार ठुलो भएका महिलाहरुलाईग’ र्भव’ती हुदा खासै स’मस्या नहुने समेत एक अ’नुसन्धानले बताइएको थियो ।बिहेपछि महिलाहरु किन धेरै मोटा”उछन १.अ'निन्द्राः बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरूको सुत्ने समय र दैनिकी बद्लिन्छ । थपिएको जि'म्
अन्तिप पटक छोरी भागिरथीले बोलेको त्यो शब्द बाटो हेरेर आँखाहरु थाके तर छोरी फर्किनन भिडियो सहित
घरको दैलोमा बस्दै बाटोतिर एको'होरो हेरी रहेकी यी आमा । जस्को ओँठमुख सबै सुकेका छन् । यिनलाई न दिनको भोक छ न त रातको निंद नै छ । छ त केवल आफ्नै जिन्दगीको स'हनै न'सक्ने पि’डा । यिनी हुन् स्कूलबाट अहिलेकी चर्चित दु'ख'द घ'ट'नाकी पात्र भागरथीकी आमा । जस्को आखाँबाट ब'र्रर आँ'शु झ'रि रहेको छ तर पुच्छ्ने' हे'क्का भने छैन । पि’डामाथि पि’डा सहुन् पनि कसरी ? श्रीमानको मृ'त्यु भएको २ महिना पनि पुरा भएको थिएन । फेरी जवान र होनहार छोरी गईन् अ'ल्प'आ'युमै । यी ए'कल आमाको काख र कोखबाट खोसि'दिए पा'पी'हरुले । स'न्तानलाई सानो चो’ट मात्रै लाग्दा त त्यसको दुखा'ई आमाबुवालाई हुन्छ भने भागरथी त अका'ल्मै यो संसारबाटै आफ्नी आमालाई सदाका लागी छा'डेर गएकी छन् । छोरी अब यो संसारमा कहिल्यै नर्फकने गरी गएको खबरले यी आमाको मन दु'खे'को छ होला ? कति छ’टपटि’एको छ होला ? यो कुराको अनुभुति केवल उनैले मात
जब आमा नाता पर्नेलाई युवकले बेहुली बनाएर गाउँमै ल्याए (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । गुल्मीको मुसिकोटमा एक युवकले आफ्नो आमा नाता पर्ने महिलालाई श्रीमती बनाएका छन् । आफन्ती र नजिकको साइनोले आमा भन्नुपर्ने महिलालाई भगाएपछि ति महिलाका श्रीमान मिडियामा आएका थिए । नातामा आमा छोरा नाता पर्नेहरुले विवाह गरेर गाउँमै फर्किएका छन् । उनीहरुको उमेरको पनि धेरै फरक छ । चार महिना देखि आफुहरु नजिकिएको युवकले बताएका छन् । युवकको उमेर २४ वर्षको छ भने महिलाको उमेर ३६ वर्षको छ । ति युवकलाई पनि नातामा आमा भन्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो । तर गाउँमा भेटघाट हुँदा बोल्दा बोल्दै आमा नातापर्नेसंग माया बसेको युवकको भनाई छ । अहिले त्यो जोडी गाउँमै फर्किएर आएका छन् । तर उनीहरुले विवाह गरेको बताएका छन् । महिलाको पहिलाको श्रीमानले साना छोराछोरी बिचल्ली पारेर श्रीमती हिडेको भन्दै मिडियामा आएका हुन् । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा थिए । आफु वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा पठाएको पैसा श्रीमतीले हिनामिना
श्रीलाई छोएर गरेको वाचा भुलेर यसरी झिकिन माझी बस्तीबाट हात , ऋ’ण लागेको बहाना
मानिस आधुनिक विश्वमा प्रवेश गरे पनि मानवियता भने हराएको छैन । हराउनु पनि हुँदैन । मानिसमा मानवियता कायमै रहेको संकेत दिन दुःखीहरुको सेवा र सहयोगमा अघि बढेका हातहरुले प्रमाणित गरिरहेका छन् । युवा क्लब हुन् वा कुनै पनि सामाजिक क्लब तथा संघ संस्था, उनीहरुले सामाजिक काममा आ-आफ्ना तर्फबाट हात बढाइरहेका छन् । यसले उनीहरुको सामाजिक कार्यमा सक्रियतालाई संकेत गरिरहेको छ । जतिसुकै विज्ञान वा प्रविधिको विकास भए पनि मानिसमा मानवियताको आवश्यकता छ । अरूको देखा'सिकी गरेर समाजसेवा गर्ने कि नाम, चर्चा र ख्यातिको मो'हमा परेर समाजसेवाको ढोँग रच्ने ? फगत आत्म'सन्तु ष्टिका लागि गर्ने कि कुनै आश–अपेक्षा नराखी मनदेखि नै गर्ने ?एक वास्तविक समाजसेवीमा सेवाकर्मबाट आउने कुनै पनि प्रतिफलको लालच भने हुँदैन, हुनुहुँदैन । आफूले आर्जन गरेको ख्याती र सम्मानलाई समाजसेवामा जोडेर त्यसबाट अन्य आन्तरिक र बाह्य फ